Guardiola Oo Ku Waaniyey City Inay Is Dejiyaan Kadib Guuldaradii Anfield
HomeWararka MaantaGuardiola Oo Ku Waaniyey City Inay Is Dejiyaan Kadib Guuldaradii Anfield
Kooxda City ayaa guuldaro kala kulantay Liverpool, taas oo gayeysiisay inay 10 dhibcood ka hooseeyaan kooxda Hogaanka horyaalka Haysa ee Chelsea, laakiin tabobarohoodu wuxuu ku doodayaa inay jirto siyaabo badan oo ay natiijo toggan ku helli karaan
Pep Guardiola ayaa carabka ku adkeeyey inuu aad ugu qanacsan yahay guud ahaan xiddigaha Manchester City iyo qaab ciyaareedkooda, wallow dhabar jab ka soo gaadhay ciyaartii u dambeysay ee Horyaalka Premier League.
Georginio Wijnaldum gool uu xili hore madax ku xareeyey ayaa ugu filaaday, naadiga kaalinta labaad ee Liverpool inay 1-0 ku khaarajiyaan City oo marti ugu ahayd Anfield Sabtidii, taas oo gayeysiisay 10 dhibcood inay ka dambeeyaan Chelsea xili horyaalku kala badh la marayo.
Guardiola ayaa ku raaxaysanayay bilowgii horyaalka guulo, isagoo 10 ciyaarood oo isku xigta guulo gaadhay tartamada oo dhan – kuwaas oo lix kamid ahi ay ahaayeen Premier League – laakiin xiligan caqabado dhawr ahi la soo darseen, kuwaas oo loo baahan yahay inuu dhakhso u xaliyo haddii kale laga goosan doono.
Si kastaba ha ahaatee, macalinkan hore u soo laylyey kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich wuxuu aad ugu kalsoon yahay in kooxdiisu isbedel muuqda ka samayn doonto safarka ciyaareed ee horyaala, kuwaas oo ay ugu soo horeyso ciyaarta West Ham ay u baqoolayaan, uguna xigaan FA Cup ka wareegiisa saddexaad ee todobaadka dambe, iyo 16 dhamaadka horyaalka Champions League oo ay ciyaarooda isku haleelayaan Monaco bisha February.
“Waxaa jira hawlo badan oo aad u badan oo dagaal ba’an loo galayo,” ayuu ku yidhi shirkiisii jaraaid ee ciyaarta kadib.
“Horyaalka Premier League, Champions League, FA Cup, [u soo bixida] Champions League xili ciyaareedka dambe.
“Marka ay bil ama laba bilood tagaan ayaynu eegi doonaa hadana bal halka aanu taaganahay, markaa kadib ayaanu go’aansan doonaa yoolkayaga xiga.
“Kadib guuldaradii horyaalka ee maalintii u dambeysay sanadka, had iyo jeer gunaanadku wuxuu noqon doonaa mid fiican’.
“Sidii ay tabobarka u qaadanayeen, aad baan ula dhacsanahay. Waxaan ku faraxsanahay inaan la shaqeeyo wiilashan, iyo jidkay doonaan inay arimaha u xaliyaan.
Barcelona Oo Guul Silic Ah Ka Gaadhay Malaga
Wenger Oo Maanta ka hadlay Kulamada FA, Barcelona, Debuchy, Elneny, Wilshere iyo Welbeck